စတင်လေ့လာသူများအတွက် အခြေခံအဆင့် အလယ်တန်းအဆင့် Intermediate အဆင့် ကျွမ်းကျင် အဆင့်
အရောင်းအဝယ်ပိတ်ဖို့အထူးအော်ဒါနှစ်ခုရှိပါတယ်: Take Profit-TP နဲ့ Stop Loss-SL အော်ဒါပါ။ ဒီအော်ဒါတွေကအရောင်းအဝယ်ရလဒ်ကိုပိုပြီးခန့်မှန်းလို့ရစေသလို၊ အမြတ်လဲပိုရစေပါတယ်။ အရင်ဆောင်းပါးမှာ SL (ရပ်-ရှုံး)အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ မဖတ်ရသေးရင် ဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ Take Profit (ရ-မြတ်)ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ အမြတ်အများဆုံးကိုင်မိဖို့ဒီအော်ဒါဘယ်လိုချိန်ရမလဲရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
Similar to Stop Loss, Take Profit order is an exit order. However, unlike SL that limits trader’s loss onatrade, TP is indicatesaparticular price at whichaprofitable trade will automatically close. In other words, TP isaprofit target. You need to place TP at the level you expect the price to reach. If you buy, TP will be above the current price. If you sell it will be below it.
သင့်မှာရောင်းဝယ်ဖို့အရမ်းကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညံ့ဖျင်းတဲ့TP အဆင့်ကိုရွေးမိရင်တော့ ရသင့်သလောက်အမြတ်များများရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ထရိတ်ဒါတိုင်းယူ-မြတ်(Take Profits)အော်ဒါဘယ်လိုချိန်ရမလဲသိသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဗျူဟာများစွာရှိပါတယ်။
I. ၁။ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ခုခံခြင်း
ဇယားတွေကိုကြည့်ရင် တန်ဖိုးတစ်ခုဟာ ထောက်ခံမှု(support) နှင့်ခုခံမှု(resistance)ကြားမှာ ဈေးကွက် အတက်အကျလှုပ်ရှားလျှက်ရှိတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒီလိုမကြာခဏရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီးတာနဲ့ ဈေးနှုန်းလဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုရွေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ခုခံမှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်က သင့်အတွက် TPများချိန်ထားဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဒီအချက်ဟာ ထရိတ်ဒါတွေအကြား ဒီဗျူဟာကိုလူကြိုက်များနေရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. ၁။ ခုခံခြင်း
2. ၂။ ဈေးကွက်မထိုးတက်ခင်ဝင်ရောက်ခြင်းအဆင့်
3. ၃။ အမြတ်ယူ (take-profit)အဆင့်
ပထမဦးစွာ တောင့်ခံထားနိုင်မည့်အနေအထားကိုရှာပါ။ ဒီအဆင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အမြတ်ရမည့်အော်ဒါတစ်ခုချိန်ထားနိုင်မှာပါ။ သင်မြင်တဲ့အတိုင်း TP ကို တောင့်ခံနိုင်မည့်အနေအထားအောက် pipနည်းနည်းလျှော့ပြီးထားပါတယ်။ ကိုယ်အမြတ်အရှုံးခံနိုင်မည့်အနေအထားထက် နည်းနည်းလျော့ပြီး TP ကိုချိန်ထားပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒါမှ ဈေးနှုန်းက ဒီအဆင့်ကိုထိမှန်မည့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး၊ သင်ပိတ်လိုက်တဲ့အော်ဒါကနေ အမြတ်ပိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. ၁။ အထောက်အပံ
2. ၂။ ဈေးကွက်မထိုးကျခင်ဝင်ရောက်ခြင်းအဆင့်
အကျက်ကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်ပြီဆိုရင် ထောက်ပံ့ထားနိုင်မည့် (support)အဆင့်ကိုသာရှာပါ။ ခုခံခြင်း(resistance)နှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေဖြင့် TPအဆင့်ဟာ ထောက်ခံမှု(support)ရဲ့ အရှေ့ pipအနည်းငယ်တိုးထားသင့်ပါတယ်။
မှတ်စု : ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံမှုအဆင့်တွေကို ယခင်ကအမြင့်နဲ့အနိမ့်တွေကိုမှတ်ထားတဲ့ ရေပြင်ညီမျဉ်းနဲ့ဖော်ပြနိုင်သလို၊ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုကိုတွက်ချက်တဲ့ (pivot points) နှင့် ဖီဘိုနာချီအဆင့်တို့လို့ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းသစ်များနှင့်ချန်နယ်များဖြင့်လည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
II. ၁။ နေ့စဉ် အကွာအဝေးအဆင့်ဆင့်
TPအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ဖို့နောက်တစ်နည်းကတော့ နေ့စဉ်အကွာအဝေးအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးချတာပါပဲ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့အကွာအဝေးညွှန်ပြချက် (ATR) ကကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ATR ဟာ သေချာတဲ့ကာလတစ်ခုအတွင်း ငွေကြေးအတွဲတစ်တွဲရဲ့ဈေးအတက်အကျကြမ်းခြင်းကို တိုင်းတာပေးပါတယ်။ ဒါဟာ ပျမ်းမျှလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပေးပြီး၊ မှန်းထားတဲ့ ငွေကြေးတစ်တွဲ pip ဘယ်နှစ်ခုလောက်ရွေ့သွားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။
1. ၁။ ART အဆင့်
2. ၂။ ဝယ်ယူမည့်အနေအထားအဝင်
3. ၃။ ARTအဆင့်နဲ့တူတဲ့ TP
အရောင်းအဝယ်တစ်ခုစတင်တဲ့အခါ အဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ART တန်ဖိုးကိုရှာပါ။ ဒီတန်ဖိုးကို အဖွင့်ဈေးနှုန်းထဲပေါင်းထည့်လိုက်ရင် TP ကို ဘယ်အဆင့်မှာထားရမလဲဆိုတာသိရပါလိမ့်မည်။
တစ်နေ့တာကာလအတွင်းမှာပဲ ဈေးနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်နိုင်တဲ့အချက်အများကြီးရှိနေသေးတာကိုလဲ သတိပြုပါ။ ART က ထူးခြားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြပေမယ့် တကယ့်အစစ်က ကွဲပြားနေနိုင်ပါတယ်။
III. ၁။ ဖယားပုံစံများ
TP ထားဖို့အသုံးပြုနိုင်မည့် တိကျတဲ့ပစ်မှတ်အဆင့်ဆင့်ကိုအကြံပြုထားတဲ့ ဇယားပုံစံအများအပြားလဲရှိပါတယ်။
“Double Top” (နှစ်ထပ်ထိပ်တန်း) ပုံစံ ဥပမာလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
1. ၁။ ရောင်းမည့်အနေအထားသို့ဝင်ခြင်း (necklineအောက်တစ်ချိုး)
2. ၂။ ပုံစံအရွယ်အစား - ၁ (နက်ခ်လိုင်း) နှင့် ၂ (အမြင့်ဆုံး) ကြားအကွာအဝေး
3. ၃။ ပုံစံအရွယ်အစားနဲ့တူညီတဲ့ TP
ဇယားပုံစံတော်တော်များများမှာ ဈေးကွက်စဖွင့်ထဲက အရောင်းအဝယ်ဦးတည်ရာ (ရောင်းရင်ကျပြီး၊ ဝယ်ရင်တက်မယ်) ကိုခန့်မှန်းပြီးစီစဉ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပစ်မှတ်တွေရှိပါတယ်။ ပစ်မှတ်တွေက ပုံစံအရွယ်အစားနဲ့တူညီလေ့ရှိတဲ့အတွက် အဆင့် ၃ ဟာ ဝယ်ရောင်းသမားတွေ TP ထားတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ထိပ်/အောက်ခြေ၊ ခေါင်း/ပုခုံး၊ စတုဂံပုံစံ စတဲ့ ၃ဆအတွက်မှန်ပါတယ်။
အမြတ်ယူဖို့ချိန်တဲ့အခါ စွန့်စား/ဆုလဒ် အချိုး (Risk/Reward) ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းအတာက ထရိတ်ဒါတစ်ယောက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရှုံးအတွက်ဘယ်လောက်ထိစွန့်စားထားသလဲဆိုတာရယ် အပြန်အလှန်အားဖြင့် အမြတ်ဘယ်လောက်ထိမှန်းထားလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ရပ်-ရှုံး (SL) ဟာ ၅၀ pip များနှင့်ညီမျှတယ်ဆိုရင် အမြတ်ယူတဲ့ (TP) က ၁၅၀ pip ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အချို့ကိစ္စများမှာ စွန့်စား/ဆုလဒ် အချိုးများက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုင်းငံ့အဆင့်တစ်ခုမှာ ရောင်းဝယ်တယ်ဆိုရင် အမှားဆိုင်းငံ့ထာတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေက မြင့်မားနိုင်ပြီး၊ သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ၁:၅ အချိုး ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မကြာခဏတော့ ထရိတ်ဒါတစ်ေးယာက်က TP အော်ဒါကောင်းကောင်းဖွင့်ထားတာတောင် သူ/သူမက ရှုံးတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့ပါလဲ? အရှုံးတွေဖြစ်လာစေမည့်အခြားအမှားတွေမလုပ်မိဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ဗျူဟာကိုသေချာလိုက်နာဖို့အရမ်းအရေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(က) စိတ်ရှည်ပါ။ ရောင်းဝယ်နေစဉ်အတွင်း TPကို အဖွင့်ဈေးရဲ့တစ်ဝက်နားအထိ မရွှေ့ထားပါနဲ့။
(ခ) TP ထိခွင့်မရှိတော့ရင် အမြတ်မရမှာမို့ ဈေးကွက်ကိုအရမ်းအစောကြီးမပိတ်ချလိုက်ပါနဲ့။
(ဂ) ဈေးကွက်ကိုသုံးသပ်တဲ့အခါသေချာဂရုစိုက်ပါ။ ဈေးကွက်သုံးသပ်တဲ့ အယ်လဂိုရီသမ်တစ်ခုဆောင်ထားပါ။
(ဃ) ကာလတိုပြဇယားတွေက သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမှားယွင်းစေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ခန်းမှန်းချက်တွေကို အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး မခန့်မှန်းပါနဲ့။ များသောအားဖြင့် ကာလတိုပြဇယားတွေပေါ်က လမ်းကြောင်းသစ် (သို့) ပြောင်းပြန်လမ်းတွေဟာ ငွေကြေးအတွဲရဲ့ဦးတည်ရာကို အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိစေပါဘူး။ သုံးသပ်ချက်များအတွက် H4 နှင့် နေ့စဉ်ဇယားများကိုပဲ ထရိတ်ဒါအများစုအသုံးပြုပါတယ်။
(င) အမြတ်ယူရမည့်အဆင့်ကို ဘယ်တော့မှမခန့်မှန်းပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်ရှုံးသွားလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကို နည်းပညာ (TA) နှင့် အခြေခံသုံးသပ်ချက် (FA) များအပေါ်သာအခြေခံထားပါ။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ အမြတ်ယူမည့်အော်ဒါတွေထားဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အစမှာထဲက TP ကိုစီစဉ်ထားသင့်ပြီး သူတို့က သင့်အရောင်းအဝယ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့စိတ်ခံစားချက် သက်ရောက်မှုတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ TPရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဗျူဟာကတော့ ခုခံ/ထောက်ပံ့ အဆင့်ကို အမြတ်ရမည့်ပစ်မှတ်အနေနဲ့ အသုံးပြုတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း သင့်ရဲ့ဗျူဟာကိုလိုက်နာပြီး တိကျမှန်ကန်တဲ့ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်တွေအပေါ်မှာ သင့်ခန်းမှန်းချက်တွေကို အခြေခံမှသာ အမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို အမြဲသတိရပါ။
အထင်ကရ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း ပုံစံ
ရွေ့လျှားနှင့် ပြန်တည့်မတ်လာသော လှိုင်းများ၊ လှိုင်းဒီဂရီများ
Elliott လှိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မိတ်ဆက်
Forex သတင်းများ နှင့် ထရိတ်ဒင်းလုပ်ခြင်း
ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ riskတွေကို စီမံလျှော့ချနိုင်မှု
Stop Loss အော်ဒါကို ဘယ်လိုထားမလဲ?
Technical indicator နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ပြကိရိယာ: ထရိတ်ဒင်း ခွဲဖြာထွက်မှုများ
12:21 15.01.19 ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဒေတာကိုကြည့်ပြီး ဗြိတိန်ပေါင်ရောင်းဝယ်ပါ
12:28 14.01.19 USD ရောင်းဝယ်ရန် အခွင့်အရေးယူပါ
16:30 10.01.19 စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းများတွင် ဗြိတိန်ပေါင်ရောင်းဝယ်ပါ